Ireo 6 mpitrandraka tsara indrindra any amin'ny Nosy Long
Etazonia New York Long Island
Raha ny toeram-pivarotan-tsolika dia nanjaka teo amin'ny habakabaka teo amin'ny Long Island, nisy varimbazaha zavamaniry efa nisokatra manerana ny nosy tato anatin'ny taona vitsivitsy. Ireo toerana ireo dia manolotra labiera mpihinam-batana toerana iray hanamboarana labiera mpandraharaha (ny ankabeazan'izy ireo dia afaka manandrana fotsiny ao an-trano), tonga lafatra ny valan-drongony, mitsidika ny fandidiana fanodinana, ary manao ny hiram-bolo eo amin'ny dingana. Ireto misy sombin-tsakafo vitsivitsy tian'ny Long Island.
Toeram-pambolena any Jamesport: Riverhead
Brickyard Farm Jamesport
Ny faran'ny herinandro 2017 dia nanamarika ny fisokafan'ny orinasa "farm-to-pint". Ny atody eto dia vita amin'ny vary orza sy tohodrano ao amin'ny toeram-ponenany miisa 43 hektara, mipetaka eo amin'ny afovoan-dalavan'i North Fork. Ny efitrano famafazana sy ny mikraoba dia napetraka ao anaty karazan-trondro lehibe iray izay misokatra amin'ny làlambe lehibe misy latabatra sy lalao. Ny faran'ny herinandron'ny ririnina dia hanolotra kamiao sakafo sy mozika mivantana, ary ireo mpitsidika dia afaka mitsidika ny toeram-pambolena amin'ny alàlan'ny fiara fitateram-bahoaka. Ohatra avy amin'ny labiera hafa avy amin'ny hopitaly avy any Long Island amin'ny alàlan'ny fetiben'ny Long Island Fresh Hop isan-taona, natao tao an-toerana.
Greenport Harbour Brewing Company: Greenport sy Peconic
Ny orinasa Greenport Harbor Brewing dia manana toerana roa: ny orinasa, efitrano fialan-tsasatra ao amin'ny trano fonenan'ny Greenport Village, ary ny toerana lehibe kokoa kokoa, miaraka amin'ny havoahangy na eny ivelany, fiara miala ao Peconic. Samy hafa ny karazana ales, lagers, ary IPAs, samy manana ny fikojakojana ny Facing East, ny New IPA any Angletera misy karazana ambim-borona ary tsiranoka amin'ny abiko / grapefruit. Ny mpamboly dia afaka feno hatrany ny andiam-baovaon'ny OG (Original Greenport), karazan-javamaniry miovaova. Ny toerana Peconic dia vao haingana no nanokatra ny trano fisakafoany manokana mampiavaka ny sombin-tsolika mipoapoaka amin'ny fampiasana afa-tsy fitaovana avy any an-toerana, avy any amin'ny toeram-pambolena avaratr'i North Fork, mba hiaraka tsara amin'ny labiera.
Bay Bay Atsimo: Bay Shore
Great Bay Atsimo, Bay Shore
Amin'ny alatsinainy omaly, ny efitrano famafàna efitrano 4,000 metatra ao Bay Shore dia feno feno olona mandona mpihinam-bilona misotro toaka ary milalao foosball na loaka. Ny safidin'ny GSB tena tia momba ny mpamokatra labiera, na izany aza, dia ny labiera tsara foana. Ny siramamy malaza, Blood Orange Pale Ale somary mangidy, nefa mangatsiaka ary mivarotra firenena maromaro, ohatra. Saingy misy foana ny fandaharam-potoana revolisiona manokana, voafetra ny famoahana an-tsokosoko amin'ny tapakila mba hanomezana fahafaham-po ny mpamafy labiera be mpahafantatra.
Blue Point dia manodidina ny taona 1998 ary manana kolokoloka noho ny antony marim-pototra. Ny labiera biriky, The Toasted Lager, no nahazo ny medaly World Beer Cup ary ny mpamokatra labiera dia nameno ny vatony tamin'ny famokarana fofona tsara tarehy, ny ankamaroan'izy ireo dia mampiditra zava-maniry mahatsikaiky toy ny alika, sokatra, ary plum. Ny ankafizin'ny fanatanjahatena dia ny Fihaonambe Oktoberfest sy Mosaico IPA. Ary, raha misy araka ny efa nokasaina, dia hanana trano vaovao ny mpamokatra labiera amin'ny faran'ny fahavaratra 2018: toerana vaovao, misy trano fisakafoanana ary 60,000 barres capacity, latsaka ny antsasakadiny kilaometatra miala ny toerana misy azy ankehitriny.
Trano mena mena ny trano miorina any amin'ny faritra atsinanan'i Long Island ary tonga ato ny fahavaratra, hahita olona misotro labiera manga avy any Montauk Summer Ale ianao any amoron-dranomasina noho ny azonao atao. Ny mpamokatra labiera dimy taona dia miteraka alesina mora vidy, ary mandritra ny fahavaratra na tsia, dia mamoaka tsiranoka mahavariana mahatsiravina sy sazy, ary Session IPAs ny orinasa. Ny efitrano, kely miaraka amina latabatra ivelany sy latabatra fiaramanidina, toy ny labiera, dia mampiseho izany toe-tsaina malain'i Montauk izany.
Sand City dia iray amin'ireo orinasa vaovao ao amin'ny nosy, manokatra amin'ny taona 2015, ary ireo hopitaly sasantsasany dia mamelatra ny IPAs ho tsara indrindra. Ny mpamokatra labiera dia mamaky ireo IPA izay tena mipoitra haingana, saingy matetika ianao no mahita kintana vitsivitsy ao amin'ny efitranony. Mofosaic dia iray amin'ireo trondro mpandresy - fanamboaran-tsolika iray mahazatra izay ahitana karazana amboadia sy fanandramana mamy sy mahafinaritra. Ny famantarana eo anelanelan'ny tranobe roa dia manamarika ny fidirana an-dalamby mankany amin'ny efitrano mahafatifaty tsara tarehy izay misy pintsy, sidina, ary ravinkazo dia efa vonona.
Daty sarobidy na maimaim-poana any Long Island, NY
Ahoana no hahazoana sakafo fihenam-bidy sy koupona ao Long Island, NY.
Mitadiava fanampiana amin'ny volavolan-tsakafo
Aiza no ahafahana mankafy ny gardens public on Long Island
Fialantsasatra mandritra ny fahavaratra amin'ny nosy Long
Ny toerana farany izay efa nokatsahinao hatramin'izay niainana tany Soisa
Ny tsara indrindra any akaikin'i Houston
Ny trano fialan-tsasatra tsara indrindra any Londres
Fomba lalao mahaliana an'i Mickey Mouse ao amin'ny Disney World
5 Ireo toeram-pitsangatsanganana mendrika dia afaka mitsidika tsy misy pasipaoro
Tari-dàlana Mini-ho an'ny Bus Terminal NYC
Fialantsasatry ny Taombaovao Sinoa sy ny fankalazana ny lanin'ny Lantern
Ny fomba fangatahana ny mpihaino miaraka amin'ny Papa any Roma
Chandler Symphony Orchestra dia manolotra maimaimpoana maimaim-poana
Top 21 zavatra hatao any Cleveland